watchOS 4.1 uye tvOS 11.1 zvakare vane yavo yechipiri beta yevagadziri | Ndinobva mac
Beta yechipiri yeWatchOS 4.1 uye tvOS 11.1 iri zvakare mumaoko evanogadzira Apple. Ino nguva mavhezheni matsva anoita kumwe kugadziridzwa maererano neshanduro yeiyo wachi yekushanda sisitimu uye zvishoma kana chero chinhu mune beta vhezheni yeApple TV, kupfuura chaiyo kuita uye kugadzikana kugadzirisa.
Zviripachena kuti ese Apple beta shanduro dzinogara dzichiwedzera kuvandudza mukuchengetedza uye mashandiro, chimwe chinhu chatakajairwa kuve nacho asi dzimwe nguva pane izvi zvigadziriso vamwe vanowedzerwa kuita zvakaziviswa kuWWDC. Mune ino kesi, iyo Apple Tarisa mune yayo beta vhezheni inowedzera Apple Music inoyerera pamusoro peWi-Fi uye LTE pamwe neApp Radio app.
Iko hapana mubvunzo kuti chero shanduko mukuita uye kunyanya mune iyo kudzikama kuchatambirwa nevashandisi uye ndezvekuti idzi dzekutanga shanduro dzeIOS hadzisi kuve dzakanyanya kunaka sezvatakazivisa panguva yekugadzwa kwayo.
Zvishoma nezvishoma Apple inoramba ichivandudza nekukora masisitimu ayo uye mune ino kesi Apple TV neApple Watch inodawo kukwenya kana kushandisa mamwe marondedzero. Zvinogara zvirinani kuva neshanduro dzebeta pane kusave nadzo, saka vagadziri vanogona kutoedza nekufungidzira kuti vawane zvipukanana zvinozogadziriswa mune inotevera beta. Mune ino kesi isu tine rese beta patafura, macOS, tvOS, watchOS uyezve, iOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » watchOS 4.1 uye tvOS 11.1 zvakare vane yavo yechipiri beta yevagadziri
Dropshelf uye Super Eraser Pro, maapplication maviri paanopihwa maeuro maviri chete